नेप्से ८० अंकले घट्यो, लगानीकर्ताले एक सातामै गुमाए २ खर्ब ! « GDP Nepal
नेप्से ८० अंकले घट्यो, लगानीकर्ताले एक सातामै गुमाए २ खर्ब !
काठमाडौं । सेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अंकले घट्दा साताको पहिलो दिन नै लगानीकर्ता निराश हुनुपरेको छ । केही दिनदेखि उच्च अंकले बढिरहेको सेयर बजारमा आइतबार भने ठूलै झट्का लागेको हो ।
पछिल्ला महिना दिनदिनै रेकर्ड बनाउँदै अगाडि बढेको नेप्सेमा अघिल्लो सातादेखि लगातार गिरावट देखिएको छ । साताको पहिलो दिन आज आइतबार नेप्सेमा ७९.७४ बिन्दुले घटेर दुई हजार ४७४.३९ मा ओर्लेको छ ।
यस्तै क वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १४.५३ बिन्दुले घटेर ४४७.२९ मा ओर्लेको छ । आइतबार नेप्से तीन प्रतिशतको हाराहारीमा ओरालो लागेको छ । कूल २०७ कम्पनीको एक करोड ६० लाख १७ हजार ३२२ कित्ता शेयर रु आठ अर्ब ३५ करोड ५२ लाख ८९ हजार ८१४ मूल्यमा खरीद बिक्री भए ।
लगातार बजार ओरालो लाग्दा कूल बजार पूँजीकरणमा ठूलो गिरावट आएको छ । झण्डै एक सातामा २ खर्ब बढीले बजार पूँजीकरण ओर्लिएको छ । नेप्सेको आइतबारको विवरणअनुसार कूल बजार पूँजीकरण ३४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड ६८ लाख १० हजार बराबर पुगेको छ ।
कारोवारका आधारमा आज शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको एक अर्ब दुई करोड १६ लाख ३२ हजार ८२४ बराबरको कारोवार भयो ।
यस्तै, पूर्वाधार बैंक ६३ करोड ४९ लाख ५५ हजार ४६०, ग्लोबल आइएमई बैंक ३४ करोड ७५ हजार २४५, नेपाल पुनरबीमा कम्पनी २८ करोड ६१ लाख ३९ हजार ७९०, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रु २५ करोड ७२ लाख ७१ हजार १७४, एनआइसी एशिया बैंक रु २४ करोड ६० लाख नौ हजार ५४५, नबिल बैंक रु २२ करोड ९४ लाख ५८ हजार ६६६, नेपाल बैंक रु २२ करोड ८५ लाख ७४ हजार ६३९, नेको इन्स्योरेन्स रु २२ करोड ६९ लाख ९४ हजार ३०२ र प्रभु बैंक रु १९ करोड ८१ लाख ९४ हजार ७५३ बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।